Archive du 20170615
Trafikana rongony tao Ihosy Zandary no atidoha ?
Rongony 20 gony no indray saron’ny polisy tao an-tampon-tanànan’i Ihosy tamin’ity herinandro ity.
Hery Rajaonarimampianina Efa ailik’ireo firenen-dehibe
Tsy afaka nihaona tamin’ireo filoham-panjakana Frantsay sy Alemana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitsidihana nataony tany Eoropa farany teo na dia re tsiliantsofina ihany aza fa efa niezaka mafy ny hanao izany.
Depiote Andriamasimanana Aureline Nanolotra « appareil echographique » ho an’Ambatondrazaka
Nanolotra fitaovana fitiliana « appareil echographique » sy ireo kojakoja madinika miaraka aminy toy ny solosaina izay amoahana avy hatrany ny vokatry ny fitiliana, ny ranom-panafody ho an'ny hopitaly ao amin’ny distrikan'Ambatondrazaka, ny sabotsy 10 jona teo,
Taratasin’i Jean Fahoany fahoany !
Salama tsara ve ry Jean ? Raha izao no mitohy dia tsy tafavoaka mandrakizay amin’io resaka famerenana ny rehetra hifankatia io indray mihitsy isika e ! Marina anie izany ry Jean e !
Tsenan’Asosizato Atsinanana Lehilahy 1 mitaky vola tsy ara-drariny
Misy tsy mazava ny resaka fitakiana vola amin’ny mpivarotra eny amin’ny Tsena Fifankatiavana eny Anosizato Atsinanana raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny fokontany.
Aferana solika 375 tapitrisa ariary Nisy nitory i Elysée Ratsiraka
Araka ny vaovao nivoaka omaly, dia nandefasan’ny polisy fampiantsoana ny Ben’ny tanànan’i Toamasina voalohany avy amin’ny antoko MAPAR, Elysée Ratsiraka.
Vahiny nampihorohoro tany Toamasina Efa manara-maso koa ny SMM sy BIANCO
Manara-maso akaiky izay ho tohin’ny raharaha mahakasika an’ilay teratany vahiny mpanao herisetra sy mpaka an-keriny tanin’olona tany Toamasina, ireo olona niharam-boina nivantana noho ny nafitsok’izy io.
Aiza ihany ny manaraka ?
Vita iny fampidirana ilay ramatoa malazan’ny kolikoly eny Antanimora ary miandry ny ho tohin’ny fitsarana ny rehetra.
Mpianatra voapoizina tany Toliara Niala bala ny minisitry ny fahasalamana
Tsy misy atahorana ny ain’ireo ankizy mpianatra any Toliara tratry ny tsy fahasalamana tampoka taorian’ny fihinana ny ody kankana « Mebendazole 500 » no antony ny talata lasa teo.
Fomba fiasan’ny sekoly ambony IST ( Institut Supérieur de Technologie) eto Antananarivo nanomboka tamin’ny 2016 ny fanamafisana sy fanatsarana kokoa hatrany ny voka-pikarohana ho an’ireo mpampianatra mpikaroka ao aminy.
Fampianarana ambaratonga ambony Miezaka manome vahana ny sehatry ny fikarohana
Miezaka manome vahana hatrany ny sehatry ny fikarohana ny minisiteran’ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika tarihin’ny minisitra Rasoazananera Monique.